राराको प्रवद्र्धन होइन, विनाश | Nagarik News - Nepal Republic Media
राराको प्रवद्र्धन होइन, विनाश
मेरो जानकारीमा कम्तीमा चारवटा रारा महोत्सव भइसकेका छन्। सन् २००५ मा कर्णालीका नेताहरूबाट सुरु भएको महोत्वस, जलवायु परिवर्तन, पत्रकार सम्मेलन, म्याराथुन आदि बहानामा भइसकेको छ। कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषको जागिर बढुवा वा प्रोजेक्ट सफल हुनुबाहेक अरू खासै केही हुन सकेको छैन। राराबाट लिनुपर्ने र सकिने लाभ लिन सकिएको छैन। २०२० सालदेखि सुरु भएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले आज पाँच दशकको फड्को मार्दा पनि राराले भने फड्को मार्न सकेन। त्यो राराको दोष हैन, अदूरदृष्टि नेताका कारण हो।
पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने संरचना खै? न बाटो गतिलो छ, न नजिक छ? जहाजबाट जाँदा महँगो र अनिश्चितता छ। खाने, बस्ने व्यवस्था केही छैन। कुनै पनि हालतमा रारामा बास बस्ने गरेर जानुपर्छ । रारा निकुञ्जभित्र के के जनावर पाइन्थे, के के पाइन्छन्, कसरी बस्छन्, के के खान्छन्, मानिसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रस्ट अनुसन्धान छैन। राराको पानीभित्र, ढुंगा र रुखहरूमा लाग्ने ढुसी र लेउको कथा कहाँ गएर जान्ने हो, नेपालगञ्ज कि काठमाडौँ?
चार्टर गरेका जहाज र हेलिकोप्टरबाट आउने मानिस अनि विष्ट–बराजुले रारा–कर्णाली झन् बिटुलो हुन्छ, झन् ठूलो खाडलमा पुग्छ। पर्यटक बढाउने हो भने पैदल हिँड्नुपर्छ।
मैले हेर्दाहेर्दै काम गर्ने, खाने, लाउने शैली फेरियो। तर हिउँपहिरो गयो, जलवायु परिवर्तनले गर्नु नगर्नु ग¥यो। तर साँच्चै रारा र कर्णालीको पहिचान र सम्मान गुम्दो छ। जबसम्म आफ्नो पहिचान र प्रयोग हामी आफैँ गर्दैनौँ तबसम्म यस्ता काम पपुलिस्ट नारा र घटना मात्र हुन् पुग्छन्।
गुरुयोजना बनाएर सानो नै भए पनि रारा जाने बाटोहरूका चिया पसलेहरूलाई सँगै लिएर छलफल गर्ने, उनीहरूको सामान्यभन्दा सामान्य संरचनाका लागि सरकारले सहयोग गरिदिने गर्नुपर्छ। भान्सामा जाली, झिँगा मार्ने औषधि, खाने र पकाउने केही भाँडाबर्तन चाहिन्छ। यसले कर्णालीको विकास त गर्छ अनि कर्णालीले नेपालको पहिचान नै बदल्छ। तर यो यस्तो हावा पाराले हुँदैन। चार्टर गरेका जहाज र हेलिकोप्टरबाट आउने मानिस अनि विष्ट–बराजुले रारा–कर्णाली झन् बिटुलो हुन्छ, झन् ठूलो खाडलमा पुग्छ। पर्यटन मौलाउने हो भने पैदल हिँड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री पनि हिँडेर नै जानुपर्छ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ १०:१७ सोमबार
राराको प्रवद्र्धन होइन विनाश